LibreOffice इम्प्रेसमा सर्टकट कुञ्जीहरू प्रयोग गर्दैछ
सर्टकट कुञ्जीहरू LibreOffice इम्प्रेसमा प्रयोग गर्दा
तपाईँ किबोर्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ LibreOffice इम्प्रेस आदेशहरू पहुँच गर्नका लागि साथ साथै कार्यस्थान मार्फत नेभिगेट गर्नका लागि. LibreOffice इम्प्रेसले उस्तै सर्टकट कुञ्जीहरू प्रयोग गर्दछ जुन LibreOffice चित्र चित्राङ्कन वस्तुहरू निर्माण गर्न.
रेखा चित्र वस्तु सिर्जना गर्न र सम्पादन गर्नका लागि
F6 रेखाचित्र पट्टीमा नेभिगेट गर्न थिच्नुहोस् ।
दायाँ बाँण कुञ्जी तपाईँं रेखा चित्र औजारको औजारपट्टीमा नपुग्दासम्म थिच्नुहोस् ।
यदि प्रतिमाको अगाडि एउटा बाँण चिन्ह छ भने, रेखा चित्र औजारले सहायक रेखाचित्र पट्टी खोल्दछ । Up वा तल बाँण चिन्ह कुञ्जी सहायक औजारपट्टी खोल्नका लागि थिच्नुहोस्, त्यसपछि Right वा Left कुञ्जी, एउटा प्रतिमा चयन गर्नका लागि थिच्नुहोस् ।
वस्तु हालको कागजातको केन्द्रमा सिर्जना गरियो ।
तपाईँंले चाहेको ठाउँमा वस्तुलाई राख्नका लागि तपाईँंले बाँण कुञ्जीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । प्रसङ्ग मेनुबाट वस्तुका लागि आदेश रोज्नका लागि, Shift+F10 थिच्नुहोस् ।
वस्तु चयन गर्नका लागि
तपाईँंले चयन गर्न चाहेको वस्तुमा नपुग्दा सम्म Tab थिच्नुहोस् ।
स्लाईड दृश्यको बेला
अर्को स्लाईड वा अर्को एनिमेसन प्रभावका लागि परिमर्जित प्रभाव
वस्तु एनिमेसन प्रभावहरू बिना प्ले गर्दा अर्को स्लाईडका लागि परिमार्जित
पहिलेको स्लाईडमा फर्कनुहोस्
निश्चित स्लाईडमा जानुहोस्
स्लाईडको पृष्ठ सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस्, र थिच्नुहोस् प्रविष्ट
जब तपाईँ स्लाईड क्रमबद्वकर्ताका लागि पहिलो स्विच गर्नुहुन्छ, थिच्नुहोस् प्रविष्ट कार्यस्थानका लागि किबोर्ड फोकस परिवर्तन गर्नका लागि. हैन भने, थिच्नुहोस् F6 कार्यस्थानका लागि नेभिगेट गर्न, र थिच्नुहोस् प्रविष्ट.
स्लाईडहरू चयन र चयन हटाइ
स्लाईडमा नेभिगेट गर्न बाँण कुञ्जीहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईँ चयन गर्न चाहनुहुन्छ, र थिच्नुहोस् स्पेसबार. चयनमा थप गर्नका लागि, स्लाइ(हरू)मा नेभिगेट गर्नका लागि बाँण कुञ्जीहरू प्रयोग गर्नुहोस्, र थिच्नुहोस् स्पेसबार फेरि. स्लाईड चयन नगर्नका लागि, स्लाईडमा नेभिगेट गर्नुहोस्, र थिच्नुहोस् स्पेसबार.
स्लाईड प्रतिलिपि गर्दा:
LibreOfficeमा साधारण सर्टकट कुञ्जीहरू
Title is: $[officename] इम्प्रेसमा सर्टकट कुञ्जीहरू प्रयोग गर्दैछ